Tag: elementrị | Martech Zone
N'ehihie a, m were awa ole na ole wee wuo saịtị mbụ m na-eji Elementor. Ọ bụrụ na ị nọ na ụlọ ọrụ WordPress, ọ ga-abụrịrị na ị nụla mkpọtụ banyere Elementor, ha ka kụrụ nrụnye 2 nde! Enyi m Andrew, onye na-arụ ọrụ NetGain Associates, gwara m gbasara ngwa mgbakwunye na azụọla m ikikere na-enweghị njedebe iji mejuputa ya ebe niile! WordPress nọ na-enwe mmetụta okpomọkụ na ike ya na-arụ ọrụ obi ọjọọ. Ha gbanyere Gutenberg n'oge na-adịbeghị anya,